कुलमानको कार्यकाल थप्न ओलीले मानेनन्, अब के हुन्छ? – " सुलभ खबर "
कुलमानको कार्यकाल थप्न ओलीले मानेनन्, अब के हुन्छ?
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल नथप्ने पक्षमा देखिएका छन्। ओली उनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा नभएपछि कार्यकाल नथपिने भएको हो ।
कुलमानको कार्यकाल थप्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दबाब दिइरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन प्रचण्ड निकटकै भएकाले पनि उक्त मन्त्रालयसम्बन्धी प्राधिकरणमा आफूले भनेको व्यक्तिमै निर्णय हुनुपर्ने पूर्व माओवादी पक्षधरको दाबी रहेको छ । त्यसैले सम्भवतः भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे प्रस्ताव लाने तयारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुलमानको नाममा सहमति जनाएका छैनन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार ओलीले पटक पटक एकैजनालाई मौका दिन नहुने तर्क राखेका छन् । उनी कुलमानको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । काम भन्दा हल्ला गरेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारमाथि दबाब बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको टिम नै असन्तुष्ट बनेको छ ।
२९ भाद्रबाट प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षीय कार्यकाल सकिदैछ । उनी २९ भदौ २०७३ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला प्रचण्डकै जोडबलमा नियुक्ति दिइएको थियो । उनले लोडसेडिङ अन्त गरेको जस लिएका छन् । तर, यसमा भारतबाट विद्युत निर्यात हुनु एउटा कारण बनेको छ ।
प्राधिकरणमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच मतभेद कायमै छ । बुधबार बालुवाटारमा यसबारे पनि कुरा उठेको बुझिएको छ । भोलि बस्ने क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै न कुनै निर्णय लिने सम्भावना छ ।